သငျသညျညစ်ညမ်းရှာနေသောအခါသင်မှဖြစ်ပျက်ရှိသည်နိုင်သည်ကိုပိုဆိုးသောအရာတစျခုမှာအကြောင်းအရာများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့တောင်းခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခမဲ့အကြောင်းအရာလဲလှယ်ရန်အတွက်ဆိုက်သို့ပေးရန်တောင်းဆိုရမည်။ သငျသညျအကြောင်းအရာများအတွက်ပေးဆောင်သည့်အခါ,ဆိုက်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုကာကွယ်ပေးရန်တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်အခမဲ့ညစ်ညမ်းရာပူဇော်သက္ကာကိုဆိုက်များအမှန်တကယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဘို့သင့်ဒေတာကိုသုံးပါသွားကြသည်ကြောင့်ပေါက်ကြားရဘို့ဒါကြောင့်လွယ်ကူပါတယ်နှင့်သင့်ညစ်ညမ်းအလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်., ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းမျှနိမိတ်လက္ခဏာကိုဖန်တီးဒါကြောင့်ဖွင့်,အရာအားလုံးသင်တို့တဘက်၌အသုံးပြုနိုင်သည့်အခါဤအရူးကြိမ်အတွက်လူသိရှင်ကြားထိတွေ့ရတဲ့ကနေညစ်ညမ်းပရိသတ်တွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့တစ်လမ်းအဖြစ်ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင်လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုခံစားနိုင်ရှိရာအများဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမတစ်ဦးဖြစ်ပြီးငါတို့သည်သင်တို့၏လိင်စိတ်အပေါငျးတို့သရှုထောင့်စူးစမ်းကြကုန်အံ့လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအကြီးအကျယ်စုဆောင်းမှုရှိသည်။ ဒီဆိုက်ကိုဖန်တီးလိုက်ချိန်မှာတော့ဧည့်သည်တွေအများကြီးရှိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကလြတ္လြတ္လပ္လပ္စီမံခန္႔ခြဲတယ္။ ကျနော်တို့ဆိုက်အပေါ်အချို့သောကြော်ငြာတွေရှိစေခြင်းငှါ,,ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအဘယ်သူအားမျှဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကြောင်းအရာပျော်မွေ့၏လမ်း၌ရလိမ့်မည်. ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုက်အဆုံးစွန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။, သူတို့ကြားတွင်သင်သည်အခြားကစားသမားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကမှတ်ပုံတင်မရှိနဲ့သုံးနိုင်တယ်၊မင်းရဲ့စိတ် ၀ င်စားမှု၊အမည်ဝှက်နဲ့ငါတို့ဂိမ်းတွေအကြောင်းပြောနိုင်တယ်။ ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုစာသား၏နောက်အပိုဒ်အတွက်ဒီဆိုက်ပေါ်မှာပူဇော်သမျှသောကြောက်မက်ဘွယ်လိင်ဂိမ်းများကိုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူကြပါစို့။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်အဂါၤများ၊သူတို့သည်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းအချို့ဖြစ်သည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်ချင်သို့သော်သင်ဇာတ်ကောင်များ၏လွတ်လပ်မှုကိုရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖွင့်သူတို့လည်းစိတ်ကြိုက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာကြ၏။ ဇာတ်ကောင်များအတွက်စိတ်ကြိုက်သင်သည်ထိုသူတို့ရုံသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏သားငယ်များကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေနိုင်အောင်အားလုံးသောသူငယ်ကိုကြည့်လမ်းကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။, ကာတွန်းတွေ၊ကာတွန်းတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊သားမွေးဇာတ်ကောင်တွေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်သားငယ်တွေနဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
အကယ်၍သင်သည်ဇာတ်ကောင်မျိုးစုံ၊ဇာတ်လမ်းလိုင်းနှင့်အဆုံးသတ်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်ပါက၊လိင်ဂိမ်းများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ဟာစွန့်စားမှု၊ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဇာတ်ကောင်အသစ်အမျိုးမျိုး၊လိင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လိင်မြင်ကွင်းအမျိုးမျိုးကိုတဖြည်းဖြည်းသော့ဖွင့်ခြင်းမပြုမီသင်၏ကြက်တိုက်ခြင်းကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်း၊စွန့်စားခြင်းအမျိုးမျိုးကိုသင်သွားရမည်။ အားကစားပြိုင်ပွဲအချို့သည်အလို၊ဂတ်စ်သို့မဟုတ်ထပ်မံပြုလုပ်သောခေတ်ရေစီးကြောင်းဂိမ်းများအတွက်ရုပ်ပြောင်များလည်းပါဝင်သည်။
ဒါကငါတို့အားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရလိမ့်မည်ဆိုက်အပေါ်အများအပြားအမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှစာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်း,အချို့သောလောင်းကစားရုံညစ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်ပင်ပဟေဠိဂိမ်းပေါင်းအများကြီးပိုရှိသည်။
ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုသင့်ရဲ့အခမဲ့လိင်ပြွန်မဆိုမှပြီးပြည့်စုံသောအခြားရွေးချယ်စရာတက်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအောင်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးစုဆောင်းမှုနှင့်ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။ ကျနော်တို့ဝဘ်ဆိုဒ်လိင်က်ဘ်ဆိုက်ထက်ပိုပြီးအပြန်အလှန်ပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာ,သငျသညျအပျော်အပါး၏မိနစ်များအတွက်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ. သို့သော်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ကျနော်တို့လုံးဝလျှို့ဝှက်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်ဆိုက်ပေါ်မှာဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကသင့်ရဲ့အိုင်ပီကိုသိပါလိမ့်မယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မှတ်ချက်အပိုင်းများတွင်နေသောအခြားကစားသမားပြောပြကြဘူးအဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့သည်ငါတို့၏ဂိမ်းကစားနေစဉ်အနီရောင်လက်ဖမ်းမိမရကြဘူးအဖြစ်,ရှိသမျှကိုသင်၏အမျိုးအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။